Astaanta Cayaaraha Olombikada Tokyo ayaa fiiro gaar ah u leh | Abuurista khadka tooska ah
Wax walba waxay nagu hogaaminayaan fikradda astaanta ee ay abuurtay Daren Newman oo loogu talagalay 2020 Tokyo Olympics. Midka uu sameeyay nashqadeeyahan ayaa lagu amaanay inuu yahay mid aad u qurux badan isla markaana ay si fiican u soo jiidaneyso ruuxda ciyaaraha ku tartami doona magaalada Japan sanadka soo socda.
Newman ayaa adeegsaday warbaahinta bulshada si loo muujiyo ciyaarta oo leh qaabab ee siddooyinku si '2020' loo aqrin karo. Jidka, wuxuu xitaa heystaa raaxo leh inuu buuxiyo mid ka mid ah siddooyinkiisa casaanka si uu u muujiyo saxanka qorraxda casaanka leh ee lagu garto calanka Japan.
Dhamaan hal astaan ​​loogu talagalay cadee dalka lagu qabtay oo aan siddooyinku ka maqnayn sannadka marka laga reebo. Sidoo kale dhaleeceeyayaashu ma maqna, sida haddii ay dhahayaan boodhadh xun ma xuma, laakiin astaan ​​rasmi ah ayay ka fog tahay waxa laga filan karo.
Arrinta xiisaha leh ee kiiska ayaa ah in Newman, markii uu arkay aqbalaada weyn ee uu ka helay dhinac dhinac ah iyo dhaleeceynta dhinaca kale, wuxuu tuuray fariin taas oo waxay muujineysaa inaadan fileynin astaantaada heshay fariimo aad u fara badan, hadaanay si kale ahayn. Ha ku sii dhex jiro badweynta farriimaha ku hadhay shabakadahaas bulshada.
Naqshadeeye yaa ayaa laga badiyay soo dhaweynta weyn ee astaanteeda iyo in ay wali maareyneyso dhammaan fariimahaas laga helay kanaalkeeda kala duwan ee bulshada. Fursad in lagu ogaado mahadsanid shabakadaha bulshada iyo sida ay ugu shaqeyn karaan si qof loo ogeysiiyo adoo noqda isbeddello ku dhaca bogagga sida Reddit ama Instagram.
Abuure astaanta rasmiga ah waxay ahayd Asao Tokolo, sidaa darteed haddii aad aragto labada midkood oo ka laalaada hareeraha shabakadahaaga, horay ayaad u ogaan kartaa cidda aad u siineyso. Ayaa ogaanaya haddii Newman uu bilaabayo inuu ka guuro wax ka badan kan Tokolo.
Ha moogaanin daqiiqad aad la kulanto fanaaniintan shaqooyinka aan rasmiga ahayn qabtay oo ku saabsan waddamada iman doona Ciyaaraha Olambikada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Marka calaamadda aan rasmiga ahayn ee Tokyo Olympics ay ka wanaagsan tahay rasmiga haa
Ku duub shaashadda kombiyuutarkaaga Recordscreen.io degelkooda
Ku hagaaji shaashadda shaashadda tifaftiraha bilaashka ah ee khadka tooska ah loo yaqaan "Screenzy"